Breakin News: Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira! | Kichuu
Breakin News: Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira!
Posted on February 8, 2020 by kichuu_admin
Breaking News: Salphinni Abiy haamidifi Bilxiginnaa akkuma itti fufeetti jira!
Obbo Lammaa Magarsaa dhimma kaafamuu Eegdoota (Security) Jawar Mohammed, Haala yeroo Oromiyaa keessa jirtufi gocha duguugaa Sanyii (Genocide) ummata Oromoo Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa irratti Raayyaa ittisa Biyyaan raawwatama jiru gara Miidiyyaan ibsuuf qophii ta’uu isaa Odeessi nu dhaqqabeera!! Yaa Rabbii Shira Abiy Ahmed fi Bilxiginnaa Lammaa irra qabi dhugaa ummataa ifa baasi!!Jacha yoomu hin dagatamne “Gooftaan keenya ummata keenya” Lammaa Magarsaa!
“Qabrii Mallasatu Jawar Mohammed irra jabate Biyya teenya keessatti? gocha Diinummati kuni.Osoo egdoota Mallas Zeenawi hin kaasin akkamitti Egdoota 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐫 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 Kaasan? Egdoota hanga amma Bajata Mootummaatin Qabrii Nama du’ee eegaa jiran kuni osoo jiru, Maalif Egdoota Jawar kaasan? Qabrii (Reeffa mallas Zeenawi) tu Jawar Mohammed irra Jabaate Biyya teenya keessatti? Kuni Gochaa diinummati malee sababa partii mormitootaf Mootumman egumsa hin godhu je,e kaase miti,
Mallasa Du’e Eeguu fiJawar Mohammed Nama lubbun jiru kan biyyaa Adduunyaa kanaf Bu,aa guddaa buusa jiru kana eegun kamtu irra fayidaa qaba jette”